Maxay ka oran hal-abuuradu dowladda cusub
Haddii Madaxweyne loo doorto kornayl C/hi, ra’iisul wasaarana C/Qaasim, wasiirka difaacana Maxamed Dheere, kan arrimaha gudahana Muuse Suudi, waliba kan dibaddana Xuseen Caydiid marka maxay curin hal-abuuradu?
“nooloow ma daaloow” miyaa la qaadin mise “nabee nooma talin maskax nooga roon magacaa ha jiro”? Haddii kale “xooggii baa dadaaloo xukanka dalka haystee, dadkiina waa ku raacee, hambalyo diirran hooya”.
Ali Maow Maalin Qofkii ugu dambeyey ee uu Furuq lagaga daweeyo Soomaaliya... Eeg halkan
Waagii Furuqu ka jiray Soomaaliya baan arki jiray wasaaradda caafimaadka oo soo qorta waraaqo ay ku leedahay: soo sheeg qof furuq qaba dabadeedna qaado labo boqol. Anigu waxaan leeyahay qofkii keena hal wax oo lagu ammaano nimankaas, ha qaato $2000. Qofkii keena wax macquul ah ooy ku fiicanyihiin waxaa loo saarin guddi, haddii lacagtaas loo xukumo waa la bixin. Tusaale ahaan haddii taageere dagaal-ooge uu dhaho hebel waa geesi waxaa la oran yuu gooyey? Hadduu cadow gooyey oo halkaas garaado ama bilad ku qaatay waxaa loo xukumin lacagtaas laakiin hadduu dhaho gacal baan dilay haddee taas geesi laguma noqdo.
Hal-abuurada waxaa u furan inay dhahaan:
“Dadkii aad disheen baa gudaha iyo dibaddaba hambalyo kuugu deeqee nooloow ma-daaloow”. Ama “nabee nooma talin, nacab nooga daran, nabsigeen ha helo”.
“Dowladda cusub” waxaa la filayaa dhamaadka Luuliyo ama bilowga Ogoosto marka maxaan dhahnaa”
“Ogoosto waa dareen hulaaban oo Soomaali la darsee Ogoosto. Derisyadaa (Itoobiya & Jibuuti) dadaaloo, xukunka dalka haystee,dadkiina waa ku raacee hambalyo diirran hooya. Dulli beynu yeelnay Ogoosto, dayday baa riyaaqay Ogoosto, ergadaa diyoowday Ogoosto, xaqii baa la duugay Ogoosto, daalin baa la doortay Ogoosto, dabin baa la qoolay Ogoosto. Derisyadaa dadaaloo, xukunka dalka haystee, dadkiina waa ku raacee hambalyo diiran hooya.
Kollay anigu “madaxweyne C/hi” Waxaan ku soo dhowayn doonaa gabaygii Allaha u naxariistee C/hi Suldaan Timocadde ee ahaa:
Sarreeyoow ma nusqaamoow aan siduu yahay eegnee (kursiga) kanna siib (kabaha yar yar) kaana saar (kabaha waaweyn gasho).
Waxaa sheeko ahaan buugta Af-Soomaaliga loogu qoray in mar nin reer Qansax ah uu reer Qurac wax ka dilay dabadeedna uu u tagay reer Qansax. Markii waxgaradkii reer Qansax shiray ayaa go’aan lagu gaaray inaan fadhi jirin ee meesha laga guuro maaddaama ay qolo kale wax ka dileen. Sidii baa go’aan lagu gaaray oo beesha caynka hoosta looga geliyey. Geeddigii baa dheeraaday oo waxaa la dhaafay meesha uu reer caadi ahi u guuri karo. Oday il-dab la oran jiray ayaa yiri reer-furid ma jirto oo dabadeedna horay usii socday. Goor habayn barkii ah ayaa waxyar la nastay isla subixii horana waa laga booday. Maalintii dambe duhurkii oo qoraxdu aad u kulushahay ayaa waxaa is hayn waayey kii wax dilay oo odaygii ka dalbay in reeraha la furo. Il-dab wuxuu yiri adkeyso arrintu waatii aad bilowdaye.
Hadda haddii guurtidii ka socotay “culumo”, hogaamiye-dhaqameedyo, “aqoon-yahan”, siyaasiyiin, ganacsato iyo waliba dumar ay noo dooreen in nimankaas aan kor kusoo xusay qaataan jagooyinka u sarreeya waddanka, shacabkuna ka aammusay oo ka gilgilan waayey. Marka aan adkeysi yeelanno. Qofkii hadhoow cataaba Soomaali kama dhalan.